Public Health in Myanmar: (ဘီ)ပိုး
ခုလိုရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ
" ကင်ဆာကတော့ ရောဂါနာမည် တပ်ပြီး ၆ လ ထက် အသက် မရှည်ပါ။ " ဆိုတာ အမှန်ပဲလားဟင်?
ဘီပိုးအကြောင်းထဲမှာ အသဲကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်က “ရောဂါနာမယ်တပ်ပြီးတဲ့နောက် ၆ လထက် ပိုမနေရပါ”လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီရေးသားချက်ဟာ ပညာရှင် သိပ်ဆံတာကို ၀န်ခံရမှာပါ။ အတွေ့အကြုံအရရေးလိုက်တာပါ။
ပညာရှင်ဆံအောင် ပြန်ရေးရရင် အသဲကင်ဆာ ဆိုတာ သူ့မှာစဖြစ်တာနဲ့ သူ့ဆီကို တခြား နေရာတခုကနေ ရောက်လာပြီး အသဲမှာ ကင်ဆာ ဖြစ်ရတာနှစ်မျိုးက အသက်ရှည်မှာခြင်း မတူပါ။ တခြား နေရာကနေ ရောက်လာတာက ပိုဆိုးတယ်။ တချို့က ၃ လ ကနေ ၄ နှစ်ခံတယ်လို့ ခြုံပြောတာလဲ ရှိတယ်။ USA မှာဆိုရင် ၁၉၉၉ သုတေသနအရ လူနာ ၁၂၃၈၂ ထဲက ၇% ဟာ ၅ နှစ်အထိ ရှင်တယ်။ ၁၉၉၂-၁၉၉၉ အရဆိုရင် ၅% ဟာ ၅ နှစ်အထိရှင်တယ်။ ၁၉၈၃-၁၉၉၀ အရဆိုရင် ၆%။ သူတို့သုတေသန မှာလဲ အမျိုးသမီးတွေက ပိုကြာကြာနေရတယ်။ ဥပမာ လူဖြူအမျိုးသျွီးတွေက ၁၀့၆% ၅ နှစ်ရှည်တယ်။
"ပညာရှင် သိပ်မဆံတာကို ၀န်ခံရမှာပါ။" လို့ ဖတ်ပါခင်ဗျား။
ရောဂါ နာမည် တပ်ခံရတဲ့သူတွေ စိတ်ဓာတ် ထိုးကျသွားမှာ စိုးလို့ ဒါမျိုး သတင်းအချက်အလက်လေးတွေကို တိကျပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကလဲ ရောဂါကို ပြန်လည် ခုခံ တိုက်ခိုက်ရာမှာ အရမ်းကို အရေးကြီးတယ်လို့ ယုံကြည်နားလည် ထားမိလို့ပါ။
အခုလို စုံစုံလင်လင် ရှင်းပြ တဲ့ တာဒေါက်တာကို ကျေးဇူး အများကြီးတင်မိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်မိလဲဆိုရင် ဒီ(ဘီ)ပိုးဆို တာကို မြန်မာလူငယ် အများစု ကအလေးမထားကြဘူးလို့မြင်မိပါတယ်။ ဒေါက်တာရေးထားတာကိုဖတ်မိမှ ပဲကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေးသတိထားရမယ်ဆိုတာ ကို နားလည်မိလို့ ပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ပညာဒါနများများပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်ပေးပါတယ်………………
ဒေါက်တာ ... (ဘီ)ပိုး ရှိနေလျှင် ဘယ်ဆေးများ ကို သောက်သုံးသင့်ပါသလဲ ... ဘယ်ဆေးဝါးမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ ...
အရည်မှ (ဘီ) ပိုး ကူးစက်တယ်ဆိုရင် ချစ်သူနှစ်ဦး နမ်းလျှင်လည်း တံတွေးမှ တဆင့်ကူးစပ်မည်လော ?
ကျွန်တော် ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ဆရာဝန်တွေ ပြောအရတော့ Interferon နဲ့ Anti-viral Agents ကို လုပ်ကြည့်တာဟာ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။ အသုံးမပြုပဲ နေနေသာထက်စာရင်၊ အသုံးပြုကြည့်လိုက်တာ ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆေးတွေ လိုအပ်မလိုအပ် သူတို့ ကျွန်တော့ ဒီအန်အေကို အရင်စစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီအန်အေကနေ ဘာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလည်း မသိဘူး သူဆိုပါတယ်(ကျွန်တော်မေ့သွားလို့ပါ)။ ဒီအန်အေစစ်လို့ မဝသေးဘူးဆိုရင်၊ အသဲကို အပြင်ကနေ ထိုးပြီး နည်းနည်းယူပြီး၊ အသဲထဲိစစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အသဲက သွေးတွေ အပြည့်နဲ့မို့ .. သွေးအိတ်ကို ဖောက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားမှာမို့ နည်းနည်း ဆေးရုံးမှာ ခေတ္တနေပေးရမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အသဲက စစ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ဆေးစတိုက်မယ်ပြောပါတယ်။ ထိုးဆေးရှိတယ်လည်း ပြောပါတယ်။ ဆေးကပြင်းတာမို့ ဆံပင်တွေ ကျွတ်နိုင်တယ်လို့တောင်ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ပေါက်လာမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဆေးသုံးဖို့ကို မလောသေးဖို့၊ ကျောင်းကိစ္စတွေ ခရီးသွားစရာတွေ ဘာတွေ ပြီးစီးတော့မှ လုပ်ချင်သပါ့ဆိုလည်း ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုအကောင်းကြီးကို ဆိုးသွားအောင်တော့ သူတို့ မလိုအပ်ရင် မလုပ်ပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီဆေးတွေ သုံးကြည့်နေတုန်း မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့ ၃ နှစ် ၅ နှစ်ဆို ဆေးတွေ ထက်ထွက်နေတာမို့ နောင်မှာလည်း အခြားဆေးတွေနဲ့ ကုသနိုင်ဖို့ အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့မေးခွန်းကတော့ မလိုအပ်ရင် ဒီဆေးတွေ မသုံးဘူးလို့ မေးကြည့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြောပြချက်အရတော့ ဒီဆေးသုံးလိုက်လို့ ဆိုးကျိုးဆိုတာ ခေတ္တပဲ ရှိပြီး၊ နောက်ပိုင်း ကင်ဆာဖြစ်မှာတို့ ဘာတို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆရာပြောတဲ့ Interferon ဆေးခတွေ ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့၊ ဒီနိုင်ငံမှာ ဆေးကုသမှုဟာ အခမဲ့မှို့၊ နိုင်ငံတော်အတွက် ဘယ်လောက် ကုန်ကျမလည်းတော့ မပြောတတ်ပါ။ တစ်ခါ ဆေးခန်းသွားပြရင် ၁၅ ယူရိုလားမသိပေးရပါတယ်၊ တစ်နှစ်အတွင်း ၃ ခါပြလို့ .. ၄၅ လောက်ပေးပြီးပြီဆိုရင် နောက်ထပ် ထပ်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အခုလို အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ကူးဆက်ရောဂါတွေကိုတော့ အစအဆုံး သူတို့ အခမဲ့ ကုပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် သိသလောက်ဝေမျှပေးတာပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး မှတ်မိသလောက် ရေးထားတာပါ။
ဖင်လန်နိုင်ငံက ဘီပိုးရှိတဲ့ သူကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလားခင်မျာ.
အိမ်ထောင်ဖက်က ဘီပိုး chronic ဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလည်း ကွန်ဒုံး သုံးရမှာလား ဆရာ ကာကွယ်ဆေးက ဘယ်လောက်ကြာခံပါသလဲ one circle (၃ကြိမ်) ထိုးပြီးရင် နောက်ဘယ်တော့ပြန်ထိုးရမှာပါလဲ ဆရာ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။